ICRC oo Cuno ka qeybisay mataban iyo Odayasha & Mamulka Ceelbuur oo Kulmay – SBC
ICRC oo Cuno ka qeybisay mataban iyo Odayasha & Mamulka Ceelbuur oo Kulmay
Posted by Webmaster on May 30, 2012 Comments
Hay’ada ICRC ayaa Deeqdan Mucaawinada ah u qeybisay Dadka Barakacayaasha ah ee ku dhaqan gudaha Degmada Matabaan ee Gobolka hiiraan iyadoo qaarkoona la siiyay dad iyagu reer guuraa ah ee ku dhaqan deegaano hostaga Degmada.
Mucaawinada ay qeybisay Hay’ada ICRC ayaa waxaa uu ka kooban yahay Raashiinka la quuto sida qeybihiisa kala duwan, waxaana loo qeybiyay qoysas gaaraya tobankun oo qoys, sida uu SBC u xaqiijiyay Gudoomiye ku xigeenka Degmada Matabaan Macalin Liibaan Cali Diiriye.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in waqtiga raashinkan la qeybiyay ay ku soo aadeyso xili loo baahnaa oo xaalad nololeed oo aad u ba’an ay ka jirtay Degmada isagoona horay ugu baaqay Gar gaar deg deg ah.
Dhinaca kale Isla wararka gobolada dhexe, Maamulka Ahlusuna waljamaaca ee Degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa kulan la qaatay Odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Kulankaasi ayaa loogaga hadlay arimo badan oo ay ka mid aheyd arinta sara u qaadista Amaanka iyo sidii la isaga kaashan lahaa Horumarinta Deegaanka .
Waxaa sidoo kale ku jiray qodobada laga wada hadlay in la hagaajiyo xiriirka odayaasha iyo Maamulka Ahlusuna waljamaaca iyo Sara u qaadista Ganacsiga,
Qaar kamid ah Odayaasha oo la hadlay Xafiiska SBC ee Dhuusamareeb ayaa sheegay in dhamaan waxyaabihii laga wada hadlay ay isla fahmeyn Maamulka Ahlusuna waljamaaca.
Sikastaba ha ahatee Maamulka Ceelbuur ayaa xooga saaraya sidii loo hagaajin lahaa Amaanka deegaanka iyo Xiriirka Odayaasha deegaanka, waxayna noqoneysaa kulankani markii ugu horeysay oo dhexmara labada dhinac.